Faah faahin dheeraad ah oo kasoo baxaya qaraxii caawa ka dhacay Muqdisho iyo qasaaraha ka dhashay qaraxaas – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin dheeraad ah oo kasoo baxaya qaraxii caawa ka dhacay Muqdisho iyo qasaaraha ka dhashay qaraxaas
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa weerar ismiidaamin ah oo maqribkii caawa ka dhacay inta u dhaxeeysa Taalada Sayidka iyo xarunta baarlamaanka federaalka Soomaaliya, kaas oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Qaraxaasi oo ahaa mid loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu dhuftay gaari ay la socdeen ciidanka nabad-sugidda qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ku sugnaa agagaarka Taalada Sayidka ee magaalada Muqdisho.
Inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaasi ku geeriyootay ilaa 4 qof oo isugu jiray dad shacab ah iyo askar ka tirsan ciidanka nabad-sugidda qaranka ee dowladda federaalka Soomaliya, waxaana qaraxaasi kadib la maqlay rasaas badan oo ay ciidankaasi ridayeen.
Qaraxaasi ayaa sidoo kale ku dhaawacmay in ka badan 10 qof oo la sheegay inay isugu jiraan dad shacab ah iyo askar ka tirsan ciidanka nabad-sugidda qaranka ee dowladda Soomaaliya.
Goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa soo buux dhaafiyay ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda qaranka oo gebi ahaan xiray wadooyinka soo gala goobtaas.
Sidoo kale, gaadiidka gurmadka deg-dega ah ee loo yaqaano Amblaasta ayaa soo gaaray goobtaasi, waxayna halkaasi ka qaadeen dadkii dhaawaca ahaa oo ay qaarkood yihiin kuwa aad u culus.
Mas’uuliyadda weerarkaasi ayaa islamarkiiba waxaa sheegtay Xarakada Al-shabaab, iyagoona sheegay in weerarkaas ay ku dileen 17 askari oo ka tirsan ciidanka nabad-sugidda qaranka Soomaaliya, oo howlgalo amni sugid ah ka waday agagaarka Taalada Sayidka ee magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, ma jirto wax faah faahin dheeraad ah oo ay laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ka bixiyeen qaraxa caawa ciidankooda lagula eegtay magaalada Muqdisho.